DHAQANKA DADWEYNAHA EE BOODADA: SALIIDAHA LAGAMA MAARMAANKA AH, LAVENDER IYO KUWA KALE - GURI, GURI
Awowayaasheen ayaa noo sheegi doona! Dhaqanka dadweynaha ee boodada: saliidaha lagama maarmaanka ah, lavender iyo kuwa kale
Ka mid ah cayayaanka dhiigga nuugaya ee si weyn u dhimi kara nolosha bini'aadamka, meel gaar ah waxaa lagu qabtaa boodada.
Waxay yihiin kuwo bacrin ah, waxay yihiin sidayaal cudurro halis ah, waxayna ku kala duwan yihiin in ay adag tahay in laga takhaluso. Qaniinyada xiiqda ayaa aad u xanuun badan.
La dagaallanka dulinka guryaha gudaha ee guryaha iyo degaannada guryaha waxaa lagu fuliyaa siyaabo kala duwan.
Ujeedooyinkaas, waxay isticmaalaan labada daaweyn ee dadka iyo sunta cayayaanka casriga ah.
Hababka dadweynaha ee looga soo horjeedo boodada guriga
Dadku waxay isku dayeen inay ka takhalusaan cayayaanka dhiig-nuugista ee qarniyadii dhexe. Habka ugu saxsan ee looga takhalusi karo boodada waxaa loo tixgeliyey inuu ku faafayo dabaqa hore ee maqaarka.
Wakhti ahaan, markii dulinku ku dul aruuray, wuu isbeddelay. Dadka khaniisku waxay gashadeen qaybo yaryar oo maqaarka ka soo baxa qoorta. Cayayaanka qaangaarka ah ayaa ku urursaday iyaga, ka dibna, oo ay weheliyaan madadaalo la dhisay, ayaa lagu gubay dab.
Hababka casriga ah waxaa loo isticmaali karaa si wada jir ah ama mid gaar ah. Ka mid ah hababka caanka ah iyo hababka cayayaanka qaybaha soo socda ayaa lagu muujiyey:
Marka la eego mid kasta oo ka mid ah hababka kor ku xusan, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sida loo diyaariyo qalabka si sax ahna loo isticmaalo. Waa in aynaan illoobin in alaabooyinka dhirta, loo isticmaalo boodada, lumiso tayada waxtarka leh, sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa in ay isla markiiba u isticmaalaan diyaarinta.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee hababka dadweynaha:
Suurtagalnimada cunto karintooda u gaar ah.
Badbaadinta ficilka bani-aadamka iyo xayawaanka rabba.
Xakamaynta cayayaanka degdega ah iyo waxtar leh.
Caawin! Marka la eego mabda'a ah in la soo bandhigo dulin, lacagtaas waxay u qaybsan tahay laba kooxood: cayayaanka waxyeello u geysta iyo ka hortagidda.
Cusbada, oo nagu yaqaan, waxay faa'iido u tahay guryaha ay ku jiraan baaskiilku bilawday iyo meesha carruurta iyo xayawaanka rabaayadu ku nool yihiin. Ugu dambeyntii iyada oo dayacaad ah ayaa liqay.
Cabbirada cusbada ayaa dhaqso u dhaqma: waxay waxyeelleynayaan xasilloonida meydka meydka, ka dib markay dhintaan. Marka aad isticmaalayso milixda si siman waxay u jajabisaa gawaarida iyo roogga guriga.
Salt inta badan la isticmaalo baking soda qadarka 200 200 200 garaam. Ficilada walaxda si la mid ah: marka lala xiriiro cayayaanka dhiig-nuugista, waxay waxyeeleeyaan daboolkooda, ka dib marka ay kudhacaan dulin
Khubarada waxay ku talinayaan in ay sugaan dhowr saacadood, ka dibna si taxadar leh u soo ururi isku dhafka nadiifiye.. Nidaamka waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo dhowr jeer si loo yareeyo tirada cayayaanka dhiigga ku jira ee guriga.
Maadadaas daawada antiseptic waxay u egtahay muuqaalka budada kristantine. Waxaa lagu kala firdhay qolka roogga.. Cayayaanka waxay ku xiran yihiin walaxda, waxay ka qaadaan qaybaheeda ku jirta jirka isla markaaba waxay u dhimataa.
Sida cusbada, walaxda sida boric acid, dhimasho si ay u cararaan, laakiin aadanaha iyo xayawaanka raba ma aha wax khatar ah, xitaa haddii ay si ula kac ah u liqaan.
Xaaladdan, laba nooc oo saabuun waa in lagu sheegaa: dhirta iyo Ilmaha. Saabbeelka taranku wuxuu saameyn xun ku yeelan karaa dadka oo keliya, laakiin sidoo kale ukuntooda iyo dirxiga. Ohoogada la daaweeyo waxay u baahan tahay in la qoyo oo lagu suuxo saabuun. Toban daqiiqo kadib waxaa lagu dhaqaa biyo kulul.
Gaar ahaan si fiican uga soo horjeeda cayayaanka dhiigga ku dhaca waxay qaadaan saabuunta ilmaha. Si aad u isticmaasho, waa inaad marka hore diyaariso isku darka.
Arrintan awgeed saabuunta suufka ku rusheeyeen.
Kadibna tirada ka soo baxda waxaa lagu qasan yahay biyaha iyo kululaynta kulaylka yar.
Kadibna basasha dufan leh ayaa lagu daraa mushaharka.
Xigta soo socota u dhaqmee sida kudhaca saabuunta taranka.
Kalluumeysigu waa abuur aad u kulul.. Uu u dulqaadanaynin heerkulka isbeddelka isbeddelka ama qabow. Iyada oo hanti iyada ah, iyada oo lagu daray daawooyinka kale ee dadweynaha, ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in laga takhaluso iyada.
Xilliga jiilaalka, la dagaallanka cayayaanka ayaa ugu fudud. Si aad uga takhalustid kaliya fur daaqadaha iyo albaabada ee dhaxan dhowr saacadood.
Isla markiiba, qabowga ayaa bilaabi doona inuu saameeyo jirka shakhsiyaadka, boodada qaangaarka ah ayaa ka baxaysa guriga, iyo ukumaha leh dirxiga ayaa dhakhso u dhimanaysa hypothermia.
Daawooyinka dadyowga ah
Cayayaanka dhiigga ku dhaca aan awoodin inay u dulqaataan urka adag. Gaar ahaan, waxaan ka hadlaynaa aromaska ​​dhirta qaarkood.
Kalkaaliyuhu markasta waa la heli karaa waxaana loo isticmaali karaa sida loogu talagalay. Waa in la xusuusnaado taas urta oo ku fiicnaado nin ayaa mararka qaar noqon kara mid halis ah si ay u cararaan.
Waxaa ka mid ah dhirta si firfircoon ula dagaalamaan dulin, Cilmi-baadhayaashu waxay qarsoodi karaan chamomile Faarax ama feverfew. Waxay si firfircoon ula dagaallantaa martida aan martida ahayn ee aqalka ah sida dharka maryaha. Isticmaalkeedu waa habdhaqameed dadweyne oo looga takhaluso wakiilada qaxoontiga.
Xakamaynta dhirta waxaa ku jira walxaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Waxba ma yeelaan caafimaadka dadka iyo xayawaanka. Si aad u diyaariso maraq, u baahan tahay inflorescences qalajiyey.
Labo muraayad oo ah pyrethrum qalalan ayaa lagu shubay biyo karkaraya..
Decoction waxaa la dhigayaa meel gudcur ah.. Waxay joogtaa ilaa inta si buuxda loo qaboojiyo.
Ka dib marka dareeruhu diyaar u yahay isticmaalka, Faleeradu waxay ku dhaqday dhulka dushooda iyo meelaha dillaacsan ee dhulka.
Caawin! Dhaqdhaqaaq farabadan oo Faarax (ama Cafistan) ayaa ficillada cusub sameeyay. Waxaa la dhigaa wareegga aqalka oo leh qashin waxaana la baddalaa isbuuc kasta dhowr mar oo cusub.
Waxyaabaha dhirta ayaa leh uro cayiman oo ka cabsanaya cayayaanka dhiig-nuugista iyo iyaga oo muddo dheer ka tirtiraya. Waxaa laga yaabaa inay guriga joogaan ujeedooyinka daaweynta iyo daaweynta labadaba.
Sida chamomile, dhirta sida qadhaadh, Tansy, lavender, Eucalyptus iyo Aira baxo.
Ka dib markii ay ku shubaan iyaga karkaraya baahida biyaha ha maraq ha ku istaag meel qabow ah 12 saacadood.
Taas ka dib dareeraha waxaa lagu shubay buufin.
First of dhan, iyada waxaa loo isticmaalaa in lagu buufiyo roogagga, roogagga iyo daboolka daboolka. Waa goobaha ugu muhiimsan ee sumcadda dulinta.
Caawin! Chips miro ayaa sidoo kale iyaga cabsiin. Siduu u yahay, sida dixiriga, waxaa ugu wanaagsan in lagu kala firdhiyo albaabka laga galo guriga.
Aromas ee dhirta citrus waxay ka careysiisaa boodada si wax ku ool ah.
Ujeedadaas awgeed qalajiyeyaal liin, mastar ama diiriye diirran.
Markaas ayay guriga oo dhan, oo ay ku jiraan meelaha ugu caansanKaas oo ku jira xayawaanka xubinta taranka, meel ka dambeysa alaabta guriga, dharka iyo marinada.
Iyadoo la raacayo boodh, cayayaanka liinta ayaa u dhiman doonta iyo aboorka.
Waa muhiim! Nidaamka dhiigga ee nuugista ma istaagi karo urka toonta iyo jinka. Qalabkani, sida dhammaan kuwa kale, waxaa lagu talinayaa in loo hormariyo si loo isticmaalo dhowr jeer ilaa natiijada la rajeynayo.
Si loola dagaallamo cayayaanka, inta badan waxaa loo isticmaalaa aromas of saliidaha lagama maarmaanka ah. Tani waa hab kale oo loo yaqaano dadku si fiican uga takhalusi karo "gardaro".
Khabiiro talin Isticmaal aruunaha dhirta badan: anise, carnations, lavender, qashinka, geed shaaha iyo Eucalyptus. Wicitaanadaas badanaa looma dulqaadan karo baaskiil.
Daaqadaha waxaa lagu daaweeyaa saliid ujeedooyin ka hortag ah ama si toos ah loogu tuuro ka soo cayayaanka dhiig-jaqaan. Waxay bilaabaan inay isla markiiba shaqeeyaan ka dib marka la dhigo qolka.
Feejignow! Dhirta cayayaanka si ay uga takhalusaan boodada waa in si taxadar leh loo isticmaalo, gaar ahaan haddii qof ka tirsan qoysku u nugul yahay xasaasiyad. Noocyo aad u xoog badan oo qumman ayaa saameyn ku leh jidhka bini'aadamka si firfircoon oo badanaa keena xasaasiyad xoog badan.
Ujeedada loo yaqaan 'prophylaxis' ee aqalka ah waxaad ku kala firi kartaa balka cusbada. Shakhsiyaadka cudurka qabta uma dulqaadan dhadhankataas oo macneheedu yahay qoyaan.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa sida fiilo loogu talagalay eyga ama qashinka. Tani waxay si gaar ah u tahay xilliga guga ka hor.marka cayayaanka la kiciyo.
Kaarbooyinka iyo daboolka daboolka waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo isku dar ah oo khamiir iyo brewer ah. Meelaha sariiraha hoostiisa, sofas iyo meelaha ka dambeeya alaabta guriga nidaam gaar ahaan tayo sare leh.
Ka dibna ka tag iyaga maalintii., iyo xilligaas ka dib waxaa la ururiyaa nadiifiye fayadhowr. Noocyada lafdhabarka ah ee maaddooyinka ka mid ah isku darka ayaa ciribtira cayayaanka si deg deg ah oo hufan.
Aalkolada ayaa lagu qasi jiray xisaabinta dhawr dhibcood oo ah laba galaas oo biyo ah. Hab wanaagsan oo loola tacaalo cayayaanka qaangaarka ee guriga.
Xalku wuxuu xajistaa dabaqyada guriga.. Waa suurtagal ah in lagu daro ammonia dareeraha biyaha oo ay ku dhaqaan qashinka xayawaanka ah ama ay ku maydhaan.
Khamriga qamriga leh khal
Qamriga Camphor waxaa lagu qasan yahay 3% oo khal. oo ku dar xalka dhowr dhibcood oo ah cologne ubaxa. Tani waa hab kale oo wax ku ool ah oo looga takhalusi karo wakiilada boodada.
Isku daridgan oo leh cadaan gaar ah waxay ku dhaqmaysaa dulinka dulinka.
Waxay ku dul rusheeysatey daaqadaha dhulka, dillaacday dhulka iyo qoryaha.
Waxaad qabsan kartaa iyo alaab guri: kuraasta kuraasta, sofas, sariiraha, iwm.. Nidaamka loo hoggaansamayo daacadnimadu waa dhowr jeer.
Wakiilada Flea ma istaagi karaan urka gaasta. By walaxkan roogga iyo dabaqyada waa la baara guriga oo dhan. Maalinta waa nadiifinta qoyan ee caadiga ah.
Dhibaatada ugu weyn ee habkani waa urka kondomka joogtada ah..
Digniin! Kerosene waa walax guban kara. Markaad la shaqeyneyso ma cabbi kartid sigaarka ama nalalka fudud. Tani waa inaan la iloobin!
Nabadgelyada iyo helitaanka daaweynta dadweynaha waxay u oggolaaneysaa inay caan ku noqdaan maanta, marka ay jirto suuq aad u badan oo cayayaanka casri ah. Waxa kaliya oo ay ku dambayn doontaa in gabdhaheena 'hooyooyinka awooda leh ee la xaqiijiyay in qarniyo ay weli yihiin kuwo khuseysa oo noo ogolaanaya in aan gaarno natiijooyin fiican wakhtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah.